Ahoana ny fomba hitohizan'ny resaka: tsy misy toro-hevitra tsy misy dikany 12! - Blog
Ahoana ny fomba hitohizan'ny resaka: tsy misy toro-hevitra tsy misy dikany 12!
Vitsy ny fifandraisana ara-tsosialy no mahafinaritra kokoa noho ny resaka malalaka, miaraka amin'ny fihodinana voajanahary rehetra.
Tsy dia maninona na miresaka amin'ny olon-tianao, ny namanao, ny mpiara-miasa aminao, na ny olona sendra mifanena aminao aza ianao amin'ny fiainana.
Ny fifanakalozan-kevitra mahafinaritra dia miova ho azy avy amin'ny lohahevitra ka hatramin'ny lohahevitra miaraka amin'ny famafazana hatsikana etsy sy eroa, ary angamba na dia fetsifetsy fetsifetsy aza mba handefasana zavatra kely (raha mety!).
Ny resadresaka toy izany dia mampandeha ireo endorphins ary afaka mamela anao hilentika ao anaty hazavan'ny fifanakalozana mandritra ny fotoana fohy.
Etsy andaniny, mety ho maivana ny toe-javatra mivadika…
… Resaka iray izay tafintohina amin'ny fifanakalozana mahasosotra mankany amin'ny iray hafa tsy misy fikorianana, faran'ny maty maro be, ary ireo fotoana 'tsy nahafoana' natahotra sy toa tsy nisy fiafarany.
Ny vokadratsin'ny tranga tahaka izany dia mety hitadidy ela ny fahatsiarovanao.
Andao hodinihintsika ny paikady vitsivitsy mety ho azonao ampiasaina mba hitazomana ny fandehan'ny lahateny sy ireo fahanginana tsy dia henjana farafaharatsiny.
Ho hitanao ihany koa fa ireto teknika ireto dia ilaina hamelomana indray ny resadresaka rehefa manomboka miadana ny hafainganam-pandeha ary alohan'ny hitotoany amin'ny fiatoana tsy azo ihodivirana sy oh-tena mahasosotra.
Ka ahoana ny fomba hitohizanao ny resaka?
1. Aza atao ambanin-javatra mihitsy ny lanjan'ny resaka kely
Na dia amin'ny kolontsaina maro aza ny hevitra momba ny resaka chit miresaka lohahevitra tsy dia lehibe toa ny toetrandro na ny fanatanjahantena dia hita fa fandaniam-potoana fotsiny, isika miteny anglisy dia mampiasa kabary kely ho vavahady ifampiresahana.
Io dia ahafahantsika manao ilay zavatra tena maha-olombelona ny fanombanana ny iray hafa ary ny fahazoana hevitra momba ny antony mahatonga azy ireo hanamarika.
Io dia mamela ny resaka hivoatra voajanahary satria ny fifandraisana eo amin'ireo mpandahateny dia miorina aloha ary mihalalina.
Ny lohahevitra tsy dia be mpahalala sy voadinika tsara efa zatra tsara - aiza ianao no mipetraka, inona no ataonao, ny toetrandro, ny fanatanjahan-tena sns ... dia manampy ny antoko rehetra hiala sasatra sy hanana ny tenany.
Raha nandany fotoana kely ianao hahafantarana ilay olona iray amin'ny alàlan'ny resaka madinidinika, dia kely kokoa ny vintana hitrangan'ireo fahanginana manelingelina rehefa mitohy ny resaka.
2. Misafidiana lohahevitra fantatrao fa mahaliana ilay olona hafa
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny resaka kely minitra vitsy dia ny manampy anao handrefy ny tiany sy ny tsy tiany.
Satria tia miresaka momba ny tenany ny ankamaroan'ny olona, ​​azonao atao ny manohy ny resaka amin'ny fametrahana fanontaniana lalindalina kokoa amin'ireo lohahevitra izay mety efa voakitika.
Ohatra, ny resaka tsy misy dikany momba ny toetr'andro dia mety hitarika any amin'ny resaka momba ny dia ski farany teo na ny onja hafanana novinavinaina ary ny vokany.
3. Hamarino tsara fa manontany ianao hoe 'Misokatra' fanontaniana
Raha te hiditra lalindalina kokoa amin'ny lohahevitra rehetra ianao, ny fomba fametrahana ny fanontanianao no lakilen'ny fahombiazana.
Tsy misy làlana tsara kokoa mankany amin'ny resadresaka mahamenatra noho ny fametrahana fanontaniana mamela ny valiny 'eny' na 'tsia'.
Izao no tiako holazaina dia ny fisorohana fanontaniana toy ny:
aiza no hitsoahana ary hanomboka fiainam-baovao
“Nandeha nanao vakansy tany Costa Rica tamin'ny herintaona ve ianao?”
Fa andramo ny fanontaniana mivelatra toy ny:
“Nilaza ianao fa nankany Costa Rica tamin'ny taon-dasa. Nanao ahoana ny toetrandro / ny morontsiraka / ny fiainana dia? ”
Ny fanontaniana misokatra dia manome ny fotoana ahafahan'ny olona iray hafa mamelabelatra ary, avy eo, izany dia hitarika fanontaniana hafa ary antenaina fa hanokatra fifanakalozan-kevitra.
Toro ambony iray hahazoana antoka fa mitazona ny fanontanianao ‘misokatra’ ianao dia ny manomboka amin'ny inona, aiza, oviana, nahoana, iza, na ahoana.
Tsy ho very ny rehetra raha toa ka mametraka fanontaniana ‘eny / tsia’ ianao dia afaka sitrana mora foana amin'ny fangatahana fampahalalana bebe kokoa, milaza zavatra toy izao:
'Te hahafantatra bebe kokoa aho. Afaka milaza amiko bebe kokoa momba ny…? ”
4. Ankehitriny ataovy amin'ny ambaratonga lalindalina kokoa ny resaka
Raha vantany vao nahavita ny asany ilay resaka kely, ny andraikitry ny mpandaha-teny tsara dia ny mampandroso ny resaka amin'ny fametrahana fanontaniana manadihady bebe kokoa.
Raha efa nanontany ianao hoe 'Aiza no ipetrahanao?', Dia afaka manohy manontany ianao hoe 'Fa maninona ianao no nifindra tany?'
Raha ny marina dia tsara ny fanontaniana hoe 'maninona' raha te handalina lalindalina kokoa ianao ary hampivelatra ny resaka.
Torohevitra fampitandremana amin'izao fotoana izao: raha vao lasa manokana sy akaiky kokoa ny fanontaniana dia alao antoka fa misy fiatraikany amin'ny tsy fahasalamana.
Raha toa tsy mahazo aina ny olona iray hafa dia alao antoka fa miverina pedal ianao ary miverina amin'ny toerana azo antoka kokoa miaraka amin'ny fanontaniana tsy dia mizaka.
5. Henoy Tsara
Tsy dia misy dikany ny fametrahana ireo fanontaniana malalaka misokatra rehetra ireo raha toa miharihary fa tsy mihaino ny valiny ianao.
Ampiasao ny teknikan'ny fihainoana mavitrika, mba hahafahanao mahatakatra tsara ny fomba fijerin'ny hafa.
Aza tapahina ary, rehefa vita ny fitenenan'izy ireo, mandehana mamintina izay nolazainy mba hanehoana fa nandinika ianao…
'Raha nahazo an'izany aho, dia toa anao izany…'
Ary raha mila fanazavana ianao satria diso ny fahazoanao zavatra, manandrama zavatra toa…
“Hoy ve ianao…?”
Raha nandinika tsara ianao dia afaka maneho fiaraha-miory amin'ny fametrahana ny tenanao amin'ny kiraron'ilay mpandahateny.
Ny mpihaino tena tsara dia ho vonona tsara hitazomana ny resaka rehefa miadana ny hafainganam-pandehany ary toa mihena ny fahalianana.
Ohatra, ny lohahevitra izay mety nokasihina teo aloha tao anaty resaka dia azo averina amina fanontaniana toy ny:
“Nolazainao teo aloha fa…”
Manokatra làlana ho an'ny fifanakalozan-kevitra bebe kokoa io.
Fanontaniana 7 tokony hapetraka mba hahafantarana olona iray
Lohahevitra mahaliana 55 horesahina amin'ny namanao
Ahoana no hiresahanao momba ny tenanao (+ zavatra tsara holazaina 12)
Ahoana ny fomba fisainana alohan'ny hitenenana
Ahoana ny fomba fitenenana marani-tsaina sy fitenenana tsara kokoa
13 Antony mahatonga ny olona tsy mihaino anao
6. Asehoy fa mifamaly amin'izay lazain'izy ireo ianao
Ny mpihaino tena tsara dia tsy mandray an-tanana ny fampahalalana fotsiny.
Na dia tsy fahalalam-pomba aza ny fanelingelenana, aza hadino ny mampiseho fifampikasohana amin'izay lazain'ny hafa amin'ny alàlan'ny fampiasana ‘mpamporisika’ toy ny “Tena?” (tsy misy maneso!), “Ah” ary “Oh.”
Azonao atao koa ny mampiasa mpamporisika tsy am-bava, toy ny fitaratra ny endrik'ilay mpandahateny amin'ny fisehoanao ho gaga na sosotra raha ilaina izany.
7. Ampiasao ny masonao hanehoana ny fahaliananao amin'izay lazain'izy ireo
Mifandraisa maso matetika rehefa mandeha ny resaka satria io dia famantarana iray hafa amin'ny haavon'ny sainao.
Mifandraisa maso foana eo am-panombohana ny resaka ary tazomy izany amin'ny alàlan'ny fijerena ny mason'ny olon-kafa mandritra ny 4 na 5 segondra…
… Tsy ela loatra ianao na mety hahita loza hivoaka mandroaka azy ireo ianao, koa aza hadino ny mijery lavitra.
Na dia sorohina aza ny masonao dia ataovy izay hahazoana antoka fa tsy mijery akaiky olona na zavatra hafa loatra ianao, na izany aza, satria izany dia hanondro tsy fitandremana.
Avereno jerena indray ny fifandraisana amin'ny maso aorian'ny segondra vitsy.
Ny fifandanjana tsara indrindra dia ny mikendry ny fifandraisan'ny maso mandritra ny 50% eo ho eo amin'ny fotoana itenenanao sy 70% amin'ny fotoana mihainoanao.
Angamba toa hafahafa ny mampihena azy amin'ny raikipohy iray, saingy io no fomba mora indrindra hitadidiana hoe ohatrinona ny fikolokoloana amin'ny maso nefa tsy mihoa-pefy.
8. Zahao izay lazain'ny fiteninao
Ny resaka tsara dia tsy ny miresaka fotsiny! Betsaka ny fifandraisana tsy am-bava izay mandeha amin'ny fifandraisan'olombelona ary ny fitenin-vatana tsara dia lakilen'ny fifanakalozana milamina sy mahazo aina.
Raha mipetraka ianao na mijoro mafy, ohatra, dia mety hahatonga ilay olona iray tsy hatahotra izany.
Andramo mitongilana kely any amin'ny sezanao, ary aza adino ny manampy tsiky malefaka (na dia mitsiky feno aza - raha tsy mety!).
Raha mijoro ianao dia miantra am-pitoerana amin'ny bara na rindrina mitovy ny vokany.
Oh, ary aza adino ny mitazona ireo soroka ireo - tsy misy zavatra mampiseho fihenjanana mazava kokoa noho ny mampikatso ny soroka manodidina ny sofinao!
9. Ela kely dia mandeha lavitra
Tsy misy isalasalana fa ny sangisangy kely dia manampy ny resaka rehetra, tsy izany fa manampy amin'ny fananganana fifandraisana tsara sy fananganana fahatsapana mpihavana.
Tsy ny olona rehetra no mpanao hatsikana lehibe indrindra, koa aza terena.
Tsy mila mibontsina amin'ny resadresaka ataonao ianao, na miteny vazivazy mihitsy aza. Ny fanehoan-kevitra maneso na manambany tena amin'ny fotoana mety dia mety hampihomehy ihany koa.
10. Mety ho lasa volamena ny fahanginana
OK, noho izany dia natomboko ity sombin-javatra ity niaraka tamin'ny fanamarihana fotoana tsy azo lavina, rehefa nangina ny resadresaka iray rehefa avy eo ary novonoiko ho faty ilay vato.
Raha ny marina, na izany aza, tsy tokony hatahotra ny hush tsindraindray ianao.
Ny fahanginana dia ampahany manandanja amin'ny kanto fifampiresahana. Ny fahalalana ny fotoana hitenenana sy ny fotoana tsy hitenenana dia fahaiza-manao fototra mila ianarana am-pahalalana.
Misy tontolo iray tsy itovizan'ny fahanginana mahatsiravina sy ny fiatoana segondra vitsy amin'ny resaka.
Tena ara-dalàna tanteraka ity farany, koa aza mikoropaka rehefa mitranga. Aza mahatsapa fa mila mamoaka zavatra ianao - na inona na inona! - mamoy fo hameno ny banga.
Izy io dia afaka manome anao fotoana hanangonana ny eritreritrao. Izy io koa dia afaka manondro fa ny lohahevitra iray dia nahatratra ny fehin-kevitra voajanahary na nanjary lasa mahery loatra noho ny fampiononana ary mamela ny fanovana kitapo.
11. Fandikan-dalàna tsy nahy
Mora loatra ny milaza zavatra izay miteraka fanafintohinana lalina mandritra ny resaka, na dia tsy noheverina ho toy izany mihitsy aza.
Ny fitenenana zavatra tsy mendrika na tsy misy dikany dia manilika ny resaka tsy misy mandanjalanja ary miteraka fahasarotana izay sarotra averina.
Ny fomba tsara indrindra dia ny miatrika izany hatrany, manome anarana azy ary mandroso.
Aza manandrana mihetsika toy ny mbola tsy nisy. Izany no fomba azo antoka hanamafisana ny ratra ary hahatonga ny resaka amin'ny fiafarana tsy milamina sy aloha loatra.
12. Tohizo ny raharaha ankehitriny
Raha miezaka ny mijanona eo an-tampon'ny zava-mitranga eo amin'ny firenena sy iraisam-pirenena ianao, manomboka amin'ny fifosana olo-malaza ka hatramin'ny olan'ny fiovan'ny toetr'andro, dia hanana lohahevitra be dia be foana ianao hitohizan'ny resaka.
Torohevitra iray anefa: rehefa miaraka amin'ny olona tsy fantatrao ianao dia fahendrena hatrany ny miala amin'ny politika fizarazarana sy ny raharaha ara-pivavahana noho ny antony izay miharihary.
Aza mikapoka soavaly maty foana!
Indraindray tsy misy dikany ny ezaka faran'izay tsara vitanao satria ny ankilany tsy liana na tsy te handray anjara amin'ilay resaka.
Mety ho noho ny antony marobe io, ny ankabeazany na ny rehetra tsy takatry ny sainao.
Aza raisina manokana ity .
Miezaha fotsiny hamita haingana ny resaka haingana araka izay azo atao nefa tsy mahalala fomba. Apetraho izany mba hiaina sy handroso!
Mamintina ny raharaha
Aza manandrana mampihatra mihoatra ny iray amin'ireo sosokevitra ireo amin'ny fotoana iray na mety hahatsapa ho tototra sy mitebiteby ianao izay hanamaina ny resaka eo noho eo.
Maninona raha andramana iray fotsiny? Rehefa tsapanao fa mahafehy azy ianao - ary antenaina fa efa nanomboka nanetsiketsika ny fifanakalozan-kevitra tamina somary nilamina kokoa izany - hahatsapa ho matoky tena kokoa ianao amin'ny fampiasana ireo teknika hafa handroso.
Ny sasany amin'ireo tolo-kevitra etsy ambony dia mety mila fanao kely sy eritreretina mialoha, fa ny valiny azonao amin'ny fanatsarana ny fahaizanao amin'ny maha-mpiresaka anao dia mendrika ezaka tokoa.
Hisy dividends amin'ny fiainanao matihanina sy ara-tsosialy ary (raha mpitovo ianao ary mitazona fiambenana ho an'ny mpiara-miasa lavorary) ny fiainam-pitiavanao koa!
Ny teny farany dia mankany amin'ny poeta anglisy David Whyte:
“Ny tena resaka dia misy fanasana hatrany. Manasa olon-kafa haneho ny tenany aminao aminao ianao hilaza aminao hoe iza izy ireo na inona no tadiavin'izy ireo. ”
'Ity dia very saina' - Tyler Breeze dia mahatadidy ny nanambadiany ny lalao nataony niaraka tamin'ny WWE Hall of Famer
6 WWE Superstars izay nilalao NFL na baolina kitra tamin'ny oniversite
WWE vola ao amin'ny Banky 2021: Nikki A.S.H. mandresy amin'ny lalao MITB vehivavy
WWE Hall of Famer dia nanambara fa te hitantana Andre The Giant (Exclusive) izy
Ny fisaraham-panambadiana Kanye West sy Kim Kardashian dia mametraka 2,1 miliara dolara amin'ny filokana: Ity ohatrinona no azon'izy roa
Ahoana no ahalalanao raha mifankatia ianao? Famantarana 10 ianao.
Lalao John Cena tsara indrindra vs. Randy Orton PPV
Damian Priest tamin'izay niarahaba azy tany amin'ny lampihazo tao amin'ny SummerSlam, nihaino an'i Bad Bunny
Ny fahasarotana momba ny fiverenan'i The Rock any Wringer ao amin'ny WrestleMania 37 dia voalaza fa nambara
'Ambany ambany ahy izy' - Roman Reigns dia nitifitra be teo an-tampon'ny WWE Star
VIDEO: Survivor Series Full Show (18 Novambra)
Tsy ampy ho anao aho
tsy manana fitiavana na inona na inona aho
ahoana no tsy tsy fahatokisan-tena sy fialonana amin'ny fiarahana
olon-tiana 3 taona tsy mahalala izay tadiaviny
firy ny mpanjifa very an'i james
rehefa misy lehilahy mibanjina ny masonao